January 6, 2021 - Padaethar
ချစ်သူဆီကမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြေရတတ်ပြီး အချစ်ရေး ကံကောင်းနေတတ်သော တနင်္ဂနွေသား/သ္မီးများအတွက် (၁)လစာဟောစာတမ်း
January 6, 2021 by Padaethar
2021- Jan(1.1.2021/31.1.2021) ဇန်နဝါရီလ တနင်္ဂနွေသား/သ္မီးများအတွက် (၁)လစာဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသား/သ္မီး ချစ်သူဆီကမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြေရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး ကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ခရီးကိစ္စတွေ တော်တော် များများအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့လဲ အထူးအဆင်ပြေစိတ်ချမ်း သာ ရမယ်။ ခြေလှမ်းအသစ်စတင်လှမ်းရမဲ့ကာလပါပဲ။ အဟောင်းတွေကို စွန့်ခွာပြီး အသစ်ဖန်တီးသွားရမဲ့အချိန်ပါ။ ဒီအပတ်ဟာမိမိကိုလိမ်လည်သွားသူမျိုးနဲ့လဲ ဆုံရတတ်ပါတယ်။ ကူညီမလိုနဲ့ ဒုက္ခပေးသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုးကွယ် စရာ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်သော ဘုရား ရဟန္တာ ပုံတော်ကားချပ်များလဲ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား ဘာသာ ခြားတွေနဲ့ပတ်သက်လုပ်ကိုင်ခြင်းများလဲ အမှားများနိုင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒီအပတ်ဟာ ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ကြား ကနေ အကျိုးတော်ဆောင်တစ်ဦးကဆင့် ဆောင်ရွက်သွားခြင်းက ပိုမိုအဆင်ပြေပါ တယ်။ စီးပွားအလုပ် ကောင်း မွန်တဲ့ကာလပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ဈေးဆိုင်တွေဆို ရောင်းအားကောင်းပေမဲ့ အကြွေးကျတာတွေ၊ အလုပ်အော်ဒါတွေရှိ ပြီးတော့ ငွေချက်ချင်းမပေါ်တာမျိုးတွေလဲ ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။ … Read more
ပုဂံ ရာဇဝင်ထဲက ဖောင်စကြာ (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးနေသော ယာဉ်
ပုဂံ ရာဇဝင်ထဲက ဖောင်စကြာ (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးနေသော ယာဉ် ပုဂံ မင်းဆက်များထဲတွင် အလောင်းစည်သူမင်းသည် အလွန်ဘုန်း ကြီးသော မင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ခမာနဲ့ထိုင်းတို့က အလောင်းစည်သူမင်းကို နတ်ဘုရားတစ်ပါးလို့တင်စားကြပါတယ်။ အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးဟာ တိုင်ခန်း လှည့်လည်တဲ့ အခါမှာ ဖောင်စကြာ ဆိုသည့် ယာဉ်ပျံကို အသုံးပြုကာ လှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အလောင်းစည်သူမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက်မှာတော့ ထို ဖောင် စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ အကြောင်းကိုရေးသားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။ ထိုဖောင်စကြာဆိုသည့် ယာဉ်ပျံမှာ အဘယ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသနည်း ? အလောင်းစည်သူမင်း၏ သာသနာမှာ ဘုန်းကံကြောင့် ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာ ယာဉ်ပျံမှာ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာ စံချိန်မှာ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ? ထို အလောင်းစည်သူမင်း၏ ဘဝ နေဝင်ချိန်မှာ အံသြဖွယ်ကောင်းလှသည်။ … Read more
ဗုဒ်ဓဟူးလေးကို ခဈြမိနရေငျ ( ၁ )ငါအရူးလေးတြောကျကို ခဈြနတောပါလားလို့တှေးလိုကျပါ။ကလေးလေးတဈယောကျကို ထိနျးနရေတာပါလားလို့ သိလိုကျပါ။တိမျဆိုငျတှလေို ရာသီဥတုလိုပဲ သူတို့ရဲ့စိတျလေးတှကေ ခဏခဏထ ဖောကျတတျလို့ပါ။ ( ၂ )သူတို့ကိုသညျးခံနိုငျမှခဈြပါ။ရဈတဲ့နရောမှာဘယျလိုရဈရမလဲဆိုတာပဲ သူတို့အတှေးထဲမှာရှိနတေတျတယျ။အရမျးအရဈသနျသလောကျကို အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ သူလေးတှပေါ။ ( ၃ )သူတို့လေးတှနေဲ့ခဈြသူဖွဈရတာ အရမျးကံကောငျးပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာလုပျလုပျ သူတို့အတှေးထဲမှာမငျးကို အမွဲနရောပေးထားတတျတယျ။ ( ၄ )ဆိုးတာတဈခုက သူတို့အပျေါ ဆိုးရငျမကွိုကျကွဘူး။သူတို့ကပဲဆိုးခငျြကွတာ ကလေးလေးတြောကျလိုပဲ။ဒါပမေယျ့ ကလေးထကျဆိုးပါတယျ ….တခါတလေ တယောကျတညျး ကြိတျပီးခံစားနတေတျတယျ ….ဘယျသူကိုမှ ဖှငျ့မပွောတတျကွဘူး သူတို့ဖှငျ့ပွောတယျဆိုရငျမငျးကို သူအရမျးခဈြလို့ပဲ။ ( ၅ )အရမျးဖျောရှမေပွတတျဘူး။ ရငျထဲမှရှိနပေမေယျ့ အပွငျကို ထုတျမပွတတျဘူး။မာနကွီးတယျထငျရလောကျအောငျ အနထေိုငျက တညျလှနျးပမေယျ့ သူတို့အရမျးခငျတဲ့သူ ခဈြတဲ့သူနဲ့ဆိုရငျတော့ပေါတောတောနဲ့ အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတဲ့အရူးလေးတှပေါ…။ ( ၆ )တကယျကို အခဈြကွီးတဲ့သူလေးတှပေါ။အမြားကွီးကွီးလညျး မခဈြတတျဘူး။ခဈြတဲ့သူကိုပဲ တနျဖိုးထားတတျတာ … Read more
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ… ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ… ဟုတ်တယ်.. မထူးဆန်းဘူး…ထူးဆန်းတာတာကတော့…အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ…ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ…တန်ဖိုးမထား… ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ်…ချောင်ရင်နှိုက်…ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ….ထူးဆန်းနေပြီ… ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ… တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက… ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို.. ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်ဒုတိယ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ် တတိယ…သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ် အခုတော့…အဲလို (၃) မျိူးသော ဒေါသတွေ မရှိတော့ဘူး.. ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းဟာ…ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးမှ ဖောက်ပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး… သူ့ရဲ့ မွေးရာပါ အငုံ့စိတ်ကိုက သူ့အသွေးအသား အတွေးထဲမှာ ပါလာခဲ့ပြီးသားပါ…အခွင့်အရေး မကြုံလို့သာ…သူလုပ်ခွင့်မရခဲ့တာပါ… … Read more
မိမိ ဘာဖွားလဲဆိုတာလည်း သိနိုင်မယ်….မိမိကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်း ပုတိဖွားဟောကိန်း
မိမိ ဘာဖွားလဲဆိုတာလည်း သိနိုင်မယ်. ဗေဒင်ကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်း ၀ ခုကြွင်းလျှင် ဝ ခုကြွင်း တနင်္ဂနွေ ဖြစ်လျှင် ပုတိဖွား ဝ ခုကြွင်းတနင်္လာ ဖြစ်လျှင် သိုက်ဖွား ဝ ခုကြွင်းအင်္ဂါ ဖြစ်လျှင် မရဏဖွား ဝ ခုကြွင်းဗုဒ္ဓဟူး ဖြစ်လျှင်အဓိပတိဖွား ဝ ခုကြွင်းကြာသပတေး ဖြစ်လျှင် ရာဇဖွား ဝ ခုကြွင်းသောကြာ ဖြစ်လျှင် အထွန်းဖွား ဝ ခုကြွင်းစနေ ဖြစ်လျှင် ဘင်္ဂဖွား မိမိ၏ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍ ၇ နှင့်စားပါ ၁ခုကြွင်းလျှင် ၁ ခုကြွင်း တနင်္ဂနွေသား ဖြစ်လျှင် ဘင်္ဂဖွား ၁ ခုကြွင်းတနင်္လာသား ဖြစ်လျှင် ပုတိဖွား ၁ ခုကြွင်းအင်္ဂါသား ဖြစ်လျှင် သိုက်ဖွား ၁ … Read more
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တိုက်ခန်းမှာ သရဲထက်ဆိုးတဲ့ သူ ရှိနေပါပြီ (အရမ်းအန္တရာယ် ရှိပါတယ်)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တိုက်ခန်းမှာ သရဲထက်ဆိုးတဲ့ သူ ရှိနေပါပြီ (အရမ်းအန္တရာယ် ရှိပါတယ်) ကျွန်မ နေတဲ့ တိုက်မှာ စိတ်ရောဂါသည် တစ်ယောက် ရှိ နေပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ပိုပို ဆိုးဆိုး လာပါပြီ …..ညဘက်တွေ လည်းမအိပ်ရဘူး …..တစ်ဒုန်းဒုန်း နဲ့ တိုက်ပေါ်က ရေတွေလည်း လောင်းချ ဒုတ်တွေလည်း ပစ်ချ တစ်တိုက်လုံး စိတ်ညစ်ရတာပါ …။ ဘယ်သူမှလည်း လာမခေါ် ပေးကြဘူး ….။ရပ်ကွက်ရော ရဲစခန်းရော ဖုန်းတွေဆက်ပါတယ် ဘာမှ မတတ် နိုင်ပါဘူးတဲ့။အခု ပွဲကြမ်း လိုက်တော့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကူညီမယ် ပြောပါတယ် ….. ဘာကူညီမလဲတော့ မသိသေးဘူး ခေါ်ပြီး ညှိနှိုင်းပြောဆို သတိ ပေးပါတယ်တဲ့ ……။သူ့အုပ်ထိန်းသူကို ဒီလောက်ပါပဲ လာခေါ်ပေးမှ … Read more